Ngaba uyinkampani yorhwebo okanye inkampani enefektri yayo?
Singabavelisi bokwenene boomatshini bobuhle, abaneqela lemveliso, iqela le-R&D, amandla okuthengisa kunye neqela lenkonzo emva kokuthengisa.
Uphi umzi-mveliso wakho?
Umzi-mveliso wethu useSuzhou, isixeko esiphuhlayo ngokukhawuleza esinegama lesidlaliso “njengegadi engasemva yaseShanghai”.Ukuba ixesha lakho likhona, wamkelekile ngokufudumeleyo ukuba uze eTshayina ukutyelela umzi-mveliso wethu!
Ingaba unayo nayiphi na iwaranti?
Ewe, sinayo.Iwaranti yonyaka omnye kumatshini wokubamba inikezelwa.Iinyanga ezintathu iwaranti yokutshintsha yasimahla yezibambo, iintloko zonyango, kunye namalungu.
Kuthekani ukuba kukho naziphi na iingxaki zomgangatho ezenzekayo ngexesha lokuqinisekisa?
Iqela lethu elixhasa itekhnoloji yobuchwephesha linokubonelela ngesoftware yohlaziyo lwasimahla kwi-3 ~ 6month.ngeenkonzo zakho zangexesha.Unokufumana uncedo olufunayo ngexesha ngefowuni, ikhamera yewebhu, ingxoxo ye-intanethi (intetho kaGoogle, i-Facebook, i-Skype).Nceda uqhagamshelane nathi xa umatshini unayo nayiphi na ingxaki.Eyona nkonzo igqwesileyo iya kubonelelwa.
Sesiphi isiqinisekiso onaso?
Bonke oomatshini bethu banesatifikethi se-CE esiqinisekisa umgangatho kunye nokhuseleko.Oomatshini bethu baphantsi kolawulo olungqongqo lomgangatho wokuqinisekisa umgangatho ophezulu.
Ndingenza ntoni xa ndingayazi indlela yokusebenzisa umatshini?
Sinevidiyo yokusebenza kunye nencwadana yomsebenzisi yereferensi yakho.
Iphakheji ye-foam, iphakheji yebhokisi ye-Aluminiyam, okanye njengeemfuno zomthengi.
Ngaba sinokuprinta iLogo yam kwiimveliso?
Ewe, siyayixhasa i-OEM.Yongeza igama levenkile yakho, Logo
Loluphi ulwimi oluxhaswa yisoftware?
Sixhasa iilwimi ezininzi
Ngaba sinokuyilungisa inkqubo yesoftware?
Ewe, sibonelela ngenkonzo ye-OEM&ODM